lulu: ချိုဆိမ့်မွှေးတဲ့ဗုံလုံသီး ပုစွန်အဆာသွပ်နှပ်နဲ့ သွားရည်တောက်တောက်ကျစေမယ့် ချဉ်ငံစပ်ငပိသုပ်
ချိုဆိမ့်မွှေးတဲ့ဗုံလုံသီး ပုစွန်အဆာသွပ်နှပ်နဲ့ သွားရည်တောက်တောက်ကျစေမယ့် ချဉ်ငံစပ်ငပိသုပ်
at 2:03 PM Labels: ဟင်းရံ, အသုပ်
ချစ်သောမောင်နှမများအားလုံး မင်္ဂလာပါရှင့့့် 
ဒီနေတော့ မောင်နှမတို့ကို ဗုံလုံသီး ပုစွန်အဆာသွပ်နဲ့ ငပိသုပ်လေး သုပ်ကျွေးရဦးမယ်နော့့့်  အချို့ဒေသတွေမှာတော့ ပဲလင်းမြွေသီးလို့ ခေါ်ကြတယ်နော့့့် 
ဈေးထဲမှာ ဗုံလုံသီးတွေ တွေ့တော့ အဆာသွပ်စားချင်တာ အရမ်းပါပဲ့့့  ပြီးခဲ့တဲ့အပတ် အိမ်ပြန်တုန်းက အမေ့ကို ဗုံလုံသီးအဆာသွပ်ပြီး ချက်စားကြရအောင်လို့ ပြောတော့ အမေက စားချင်ရင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ချက်တဲ့့့  လက်ဝင်လွန်းလို့တဲ့့့  ကျွန်မလည်း ချင်ခြင်းတပ်တာ့့့  အဲ့ဒါကို စားချင်လိုက်တာ့့့  အိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေကို ဒီဟင်းကြိုက်/မကြိုက် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရင် ကျွန်မရှုံးမှာ သေချာပေါက့့့်  ချက်ရတာ လက်ဝင်လည်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ချက်မှာပဲ ဘာဖြစ်လဲပေါ့့့  (အစား အသောက် သောင်းကျန်းတတ်တဲ့့့ စားချင်ပြီဆိုရင် ဘယ်လောက်ပဲ အချိန်ကုန်ကုန့့့်  ချက်စားတတ်တာက ကိုယ့်အပြစ်နဲ့ကိုယ်ပဲလေ)
မနေ့က ရုံးကအပြန်ဈေးဝင်တော့ ဗုံလုံသီး (၂) တောင့် ၀ယ်လာခဲ့တယ့့့်  ပုစွန် (၁၅) ကျပ်သား ၀ယ်ခဲ့တယ့့့်  အဲ့ဒါနဲ့ပဲ မနက်က အစောကြီးထပြီး ကျွန်မရဲ့ ချင်ခြင်းတပ်ခြင်း ဝေဒနာကို ကုသဖို့ရာ မဟာစီမံကိန်းကြီးကို အကောင်အထည်ဖော်တော့တာပေါ့့့ 
လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ ဗုံလုံသီး (၂) တောင့်၊ ပုစွန် (၁၅) ကျပ်သား၊ ကြက်သွန်ဖြူ (၇) မွှာ၊ ကြက်သွန်နီ အလတ် (၃) လုံး၊ ဆားအနည်းငယ်၊ သကြားအနည်းငယ်၊ ဆီအနည်းငယ်တို့ပါနော့့့် 
ဗုံလုံသီးတွေရဲ့ အပြင်လွှာကို ဓားနဲ့ ခြစ်ပစ်၊ လေးလက်မအရှည်လောက်လေးတွေဖြတ်ပြီးတော့ အထဲက အစေ့တွေကို တူနဲ့ ထိုးထုတ်ပစ်၊ ရေဆေးပြီး စစ်ထားလိုက်ပါတယ်။
ကြက်သွန်ဖြူနီနဲ့ ပုစွန်တို့ကို တောက်တောက်စင်းလို့ရသလို ဘလင်ဒါထဲ ထည့်ကြိတ်လိုက်လို့လည်း ရပါတယ့့့်  အဆာသွပ်ဖို့ပုစွန်ကြိတ်ထားတဲ့အထဲ ဆားနဲ့ သကြားနည်းနည်းထည့်နယ်ပြီး အသင့်ပြင်ထား လိုက်ပါတယ့့့်  ပြီးတော့မှ ဗုံလုံသီးတစ်ပိုင်းချင်းစီထဲကို ပုစွန်တွေကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် အဆာသွပ်ပါတယ့့့် 
အသင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင် ခပ်ကျယ်ကျယ်အိုးတစ်လုံး (သို့မဟုတ်) ဒယ်အိုးကျယ်ကျယ်ထဲ ဗုံလုံသီးတွေကို စီစီရီရီထည့်၊ ဆီထည့် (ဆီများများစားတတ်ရင် များများထည့်လို့ရပါတယ်ပြီး မီးဖိုပေါ်တင်ပြီး ချက်ပါ။ ရေလုံးဝ မထည့်ဘဲ ချက်ပါနော့့့်  ဗုံလုံသီးဆိုတဲ့အမျိုးက သူ့ဟာသူ ရေတွေ ထွက်လာတဲ့အတွက်ပါ့့့ 
၇ မိနစ် လောက်တည်ပြီးတဲ့အခါ အဖုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင် အသီးထဲက ရေတွေထွက်လာတာတွေ့မှာပါ့့့  အဲ့ဒီအခါကျ ကြေမွသွားသော ဗုံလုံသီးများ ဖြစ်မသွားရလေအောင် သတိထားပြီး အသီးတွေကို ဟိုဘက် ဒီဘက်လှန်ပေးပါ့့့  ပြီးတော့မှ နောက်ထပ် ၅ မိနစ်လောက် ထပ်တည့့့်  ရေအခမ်း အသီးနူ့း့့ အပိုလိုမရှိ ကွက်တိ ဖြစ်သွားတာပေါ့့့  ဒီဟင်းက အချိုလေ့း့့  အနံ့လေးကလည်း မွှေးနေတာပဲ့့့  အရသာလေး ကတော့ ပြောမနေနဲ့့့  အရမ်းကောင့်း့့  (အရည်လေးဆမ်းစားချင်ရင်တော့ ရေနည်းနည်းထည့်ပြီးချက်လို့ ရတယ်နော်)
ဒီဟင်းနဲ့ လိုက်ဖက်တာကတော့ ငပိသုပ်ပါ့့့  ငပိစိမ်းစား ထမင်းစားဇွန်းတစ်ဇွန်းကို မီးကင်လိုက်ပါ့့့  ပြီးတော့ ကြက်သွန်နီဥကြီးတစ်လုံးကို ပါးပါးလှီး ရေဆေးပြီး ရေစစ်ထာ့း့့  ငရုတ်သီးစိမ်းလေး ပါးပါးလှီ့း့့  (ဗိုက်နာမှာစိုးရင် အိုးကင်ပူတိုက်ပြီး ထောင်းလိုက်)၊ ပုစွန်ခြောက်မှုန့်လေး လက်ဖက်စားဇွန်း ၃ ဇွန်းလောက် ထည့့့်  သံပရာရည်ရွှဲရွှဲလေးညှစ်ပြီး အားလုံးသမအောင် နယ်လိုက့့့်  အဲ့ဒါဆို အနံအရသာနဲ့ ပြည့်စုံပြီး သားရည်တောက်တောက်ကျစေမယ့် ငပိသုပ်လေးရပြီ့့့ 
ချိုဆိမ့်မွှေးနေတဲ့ ဗုံလုံသီးအဆာသွပ်နှပ်နဲ့ သံပရာနံ့မွှေးမွှေ့း့့ ချဉ်ငံစပ်အရသာနဲ့ ငပိသုပ့့့်  ဒီနှစ်မျိုးနဲ့ဆို ဆွေမျိုးမေ့ပြီပေါ့့့ 
ဒီနေ့ထမင်းချိုင့်ကိုအဲ့ဒါနဲ့ ထည့်ခဲ့တာ့့့  စားလို့တော့ သိပ်ကောင်းပါတယ့့့်  အဆာသွပ်ရတာ လက်ဝင်ပြီး အချိန်ယူတာမို့ နောက်တစ်ခါ အဲ့ဒီဟင်းချက်စားချင်ရင်တော့ ပိတ်ရက်မှ လုပ်ဖြစ်တော့မယ့့့် 
ပုစွန်အစား ကြက်သား၊ ၀က်သား၊ ဆိတ်သား၊ ပုစွန်ခြောက် ကြိုက်နှစ်သက်ရာနဲ့ ချက်စားနိုင်ပါတယ့့့်  အဆာသွပ်ရမှာ အချိန်ကုန်မှာစိုးရင်တော့ ဗုံလုံသီးတွေကို မထူးမပါးလှီးပြီးတော့ နှစ်သက်ရာ အသား နဲ့ ရောချက်လိုက်လည်း စားလို့ကောင်းတာပါပဲ့့့ 
တစ်ခါတလေ အစားအစာလေးကို ကွန့်ပြီး လှတပတဖြစ်အောင် တန်ဆာဆင်ပြီး စားရတာလည်း ပင်ပန်းပေမယ့် စားလို့ ပိုဝင်တယ်လို့ ထင်မိပြန်ရော့့့  ကျွန်မရဲ့ ချင်ခြင်းတပ်တဲ့ စိတ်လေးလည်း အာသာ ပြေသွားပြီပေါ့့့ 
မောင်နှမတို့ရေ့့့  ပင်ပန်းတယ်လို့တော့ မထင်ပါနဲ့့့  တစ်ခါတလေ ရာသီပေါ် ဗုံလုံသီးလေးကို ဒီလိုလေးနှပ်ပြီး ငပိသုပ်လေးနဲ့ တွဲဖက်စားသုံးကြည့်ကြပါဦးလို့့့့ 
ဆောင်း June 14, 2012 at 2:52 PM
လုလု အမျိုးသားကို တပတ်တခါ ပေါင်ချိန်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ထား နော်
လုလု အချက်ကောင်းလို့ အရမ်းစားပြီး ... ??.....
၀၀ ကြီး .... ဖြစ်လာမှာ ...
အင်း.. အဲ... ၀၀ကြီး ဖြစ်လာမှာ စိုးလို့ သတိပေးတာပါ။ ဟင်းဟင်း...
Unknown June 14, 2012 at 4:58 PM
Wow, your blog is amazing. We love to come come and we will come back to visit it!
We haveabig classified site in Myanmar. Please visit us back at: http://ads.com.mm/?cid=4fd60e51e4b0fa6db841e336&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_phung&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog
Shinlay June 15, 2012 at 9:23 PM
rose of sharon June 17, 2012 at 12:00 PM
ငါးပိသုတ်လေးက ဘာဟင်းမှမပါလဲ ထမင်းစားမြိန်တယ်... ပုံလေးကြည့်ပြီးသွားရည်တွေကျ :))
လုလု June 21, 2012 at 6:02 PM
မဆောင်းရေ့့့ 
၀၀ကြီးဖြစ်မှာကို သူက သိပ်ကြောက်တာတဲ့့့  တစ်နေ့တစ်နေ့ သူပေါင်ချိန်တက်လာပြီ့့့  ၀ိတ်ချမယ်ချည်း အော်နေလို့ မနည်းတားထားရတာ့့့  သတိပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် မမ
Thank you for ur visiting.
မမရှင်လေးရေ့့့ ဗိုက်ဆာလာရင် များများစားနော့့့် 
မမနှင်းဆီရေ့့့  ငပိသုပ်လေးက မမပြောသလိုပဲ ထမင်းစားမြိန်တာ့့့  မမလိုလည်း ညီမလေးလည်း သွားရည်ကျ့့့ 
Mary Grace July 19, 2012 at 7:01 PM
Unknown July 20, 2012 at 4:38 PM